विचित्र संसार Archives - Page2of 61 - दैनिक नेपाल न्युज
माता मनकामना माइले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुहोस्, आजको राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नजिकका आफन्तजनहरु बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । संचित रकम खर्चगर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोछ । वाणीका कारण सामान्य बादविवादको झमेलामा फस्ने सम्भाबना रहेकोछ । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको समय रहेकोछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, […]
आइतबारको दिन भुलेर पनि नगर्नुस् यि काम, अशुभ मानिन्छ !
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार सबेका लागी महत्वपूर्ण हुन्छ । साताकै पहिलो दिन भएकाले मानिसहरुले आफ्नो नयाँ योजना अनुसार यो दिनलाई सदुपयोग गर्ने योजना बुनिरहेका हुन्छन् भने यो दिन खासमा भगवान् सूर्य देवताको दिनका रुपमा पनि हेरिन्छ ।ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आजको दिन सूर्य देवताको मन्त्र जप तथा पूजाको विशेष महत्व रहने गर्दछ । […]
तपाईंसँग यदि यस्ता चार बानी छन् भने तपाईं कहिल्यै असफल हुनु हुँदैन !
आचार्य चाणक्यले जीवनलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउनका लागि थुप्रै नीति बनाए र चाणक्य नीतिलाई त्यसैमा समाहित गरे । आचार्य चाणक्यको यो नीति आजसम्म पनि सान्दर्भिक छ । विष्णु गुप्त र कौटिल्यको नामले परिचित चाणक्यले सफलताका लागि चार यस्ता कुरा बारे जानकारी दिएका छन् जसको अनुसरण गरिए सफलता हात पार्न सकिनेछ । चाणक्यका अनुसार मनुष्यले यदि यी […]
बुधबारका दिन यी काम गर्नुहोस्, मिल्नेछ सोचेभन्दा धेरै सफलता
काठमाडौँ । हिन्दुधर्मअनुसार बुध ग्रहलाई विष्णुको अवतार मानिन्छ । बुधको दिशा उत्तर हो भने उत्तर दिशामा कुबेरको स्थान रहेको हुन्छ । यदि तपाईको घरमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको छ भने बुध ग्रहलाई पुजा गर्नुहोस् । बुधबार विष्णु भगवानको पुजा आरधना गर्नाले विद्या, धन तथा व्यापारिक उन्नतिको साथै बुढेसकाबाट टाढा रहन सकिन्छ । बुधलाई महत्वपूर्ण तथ्यहरु […]
माता पाथीभराले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस् आजको राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्यसम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछन । हरकोहीको बिश्वासमा नपर्नु उत्तम रहनेछ । कुराकाट्ने हरुको बृद्धि हुनेछ । परोपकार को क्षेत्रमा मन जानेछ । नजिकका मित्र बाट धोका […]
मेषः– मध्यान्ह सम्म समय प्रतिकुल बढि देखिन्छ । मनमा शान्ति मिल्ने छैन । मध्यान्हबाट समय सामान्य सुधार आउनेछ । कामले पूर्ण गति लिने छैन । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । आफन्तले धोका दिने छन् । आफ्नो धन अरुको लागि खर्च गर्नु पर्ला । स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार आउनेछ । वृषः– समयमा काम नगरे विग्रिने […]
नेवार समुदायमा सिथि नखः पर्व मनाइँदै
भादगाउँ, २ असार: जेष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी अर्थात् कुमार षष्ठीका अवसरमा नेवार समुदायले आज धुमधामका साथ सिथि नखः पर्व मनाउँदैछन । प्रत्येक वर्ष जेष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठीको दिन मनाइने यस पर्वमा विषेशगरी कुमार देवताको पूजा गरी मनाइन्छ । ग्रीष्म ऋतुमा मनाइने सिथि नखः पर्वमा कुमार देवतालगायत नगरभित्रका सबै देवीदेवताको समेत पूजा गर्ने परम्परा छ । […]
मेषः–समयमा सुधार आउनेछ । सहज र सरल विधिबाट काम हुनेछन् । सहयोगी मित्रहरु भेटिने छन् । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । आर्थिक कारोवारमा चनाखो रहनु होला । बाह्य कुरामा ध्यान केन्द्रित नगर्नु होला आफैलाई घाटा हुनेछ । पठन पाठन मन्द गतिमा अगाडि बढ्नेछ । घरका समस्या केहि समाधान हुनेछन् । वृषः– गलत संगतको शिकार […]
माता पाथिभराले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुहोस् असार १ गतेको राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यमा अधिक समय ब्यतित हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्छन । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर भएको खण्डमा भने अरुको बिश्वास जितिने छ । बृष […]
मनकामना माइले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशीफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) बल तथा प्रराक्रममा बृद्धि हुनेयोग रहेकोछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहनेछ । आम्दानिको क्षेत्र मध्यम रहनेछ । धार्र्मीक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । अप्रत्याशीत खवरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । दुर्घटनापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोले सजग भइ यात्रा […]
यि ६ लक्षण भएका पुरुषहरुसँग घुम्न चाहन्छन् महिला
काठमाडौं । साधारणतया हामीले देख्ने गरेका छौं एकैनासको व्यक्तित्व भएका महिला पुरुषको जोडी हजारौंमा एक मिल्छ । अक्सर जोडीमा एउटा न एउटामा केही न केही कमजोरी देखिएकै हुन्छ । अग्लो–होचो, कालो–गोरो, मोटो–दुब्लो, आदि इत्यादी । कुनै पनि हिसाबले म्याचिङ नभएको जोडी देखिन्छ अनि लाग्छ र मान्छे भन्छन् प्रेम अन्धो हुन्छ । त्यसैले प्रेममा शारीरिक वनावटले […]
यदि तपाईमा यी ५ संकेत छन् भने बुद्धिमान हुनुहुन्छ !
एजेन्सी । संसारभरका मानिसमा सबैमा अलग्गै विशेषता हुन्छ । मार्कसिटमा हुने अंकको आधारमा व्यक्ति कत्तिको बुद्धिमान छ भन्ने जान्न सकिंदैन । किनकी हरेक मानिस कुनै एउटा पाटोमा बुद्धिमान हुन्छ । दिमागको भाग र कामलाई विभिन्न वैज्ञानिकले अलग अलग काम तथा हिस्सामा बाँडेका छन् । कसैले दिमागलाई तीन भागमा बाँडेका छन् त कसैले छ भागमा । […]
माता पाथिभराले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुहोस् आजको राशिफल
—रमेश केसी, बझाङ, २६ जेठः हुम्ला जिल्लाको सिमकोट सेमन्या घर भई करिब ४० वर्षदेखि बझाङको साईपाल गाउँपालिकामा बस्दै आएका मनबहादुर महत अहिले उमेरले ७६ वर्ष पुगे । हातमा चुरोट सल्काउँदै ४० वर्ष अगाडि बझाङ सदरमुकाम चैनपुर सम्झदै उनले भने, “चैनपुरमा औँलामा गन्ने घरहरु थिए । चैनपुरमा पाठा लिएर आउँदा, पाठा देउ जग्गा लेउ भन्थे, के […]
पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुस् आजको रशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) खानपानका कारण स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखा पर्न सक्नेछ । वितीय क्षेत्रमा गरीएको लगानीले दिर्धकालीन फाईदा दिलाउनेछ । कार्य क्षेत्र परीर्वतनको समेत सम्भाबना रहेकोछ । वाणीका कारण आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, […]